သမ္မာကျမ်း သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်များ၏ကျမ်းစာဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်ပြောသောစကားများကို ရေးသားထားသည့်စာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယေရှုခရစ်တော် မဖွားမြင်ခင်က ရေးခဲ့သော ကျမ်းများကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ဟုခေါ်ပြီး ခရစ်တော်မွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ရေးသားသည့်ကျမ်းများကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း ဟုခေါ်ပါသည်။ ရေးသားခဲ့သူများမှာ တံငါသည်မှ ရှင်ဘုရင်အထိ လူအမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ ရူပါရုံပေးခြင်းဖြင့် ရေးနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင် ၃၉ ကျမ်းပါရှိပြီး၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်၂၇ ကျမ်းပါဝင်သည်။ ရိုမင်ကတ်သလလစ်ကျမ်းတွင် ကျမ်းပို (apocrypha) ၂၃ ကျမ်းပါရှိ၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ၄၆ ကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ၂၇ ကျမ်းပါရှိသည်။ ဂရိနှင့် ရုရှအောက်သိုဒေါ့ကျောင်းတော်များက ဖော်ပြပါကျမ်းပိုများအပြင် အခြားကျမ်းပိုများကိုလည်း လက်ခံကြသည်။
မည်သည့်အချိန်မှ စတင်ရေးသားခဲ့သည်ကို အတိအကျမသိနိုင်သော်လည်း ဂျူးလူမျိုးများ၏ မောရှေပညတ်တရား ၅ကျမ်းမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မောရှေရဲ့ ပညတ်တော် ၁၀ ပါး ကို ဘီစီ ၁၄၀၆ (မောရှေ သေဆုံးချိန်) မတိုင်မီရေးခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ဘေဘီလုံသားများ ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ပရောဖက် နေဟမိ နောက်ဆုံး ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အချိန် ဘီစီ ၄၃၂ အချိန်ခန့်တွင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ နောက်ဆုံးကျမ်းကို ရေးသားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၄၀⁠၀ ကျော် မည်သူမျှ ကျမ်းမရေးခဲ့ပဲ ခရစ်တော်ယေရှုကို ဖွားမြင်သည် ဘီစီ ၆ - ၅ ခန့်တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းအတွက် ရေးသားရန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ကို ကားတိုင်တင်သတ်ခဲ့သည် အေဒီ ၃၀ နောက်ပိုင်းတွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာများကို တမန်တော်များက ရေးသားခဲ့သည်။ တမန်တော် ရှင်ပေါလု၏ သက်သာလောနိ ပထမ စာစောင်ကျမ်းသည် ဓမ္မသစ် ပဌမဆုံးကျမ်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်သော ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို တမန်တော် ရှင်ယောဟန် သေဆုံးသည့် အေဒီ ၉၅ခန့်တွင် ရေးသားသည်ဟု ဆိုသည်။
သမ္မာကျမ်းစာကို အမေရိကန် နှစ်ခြင်းသာသနာပြုဆရာကြီး အေဒိုနီယံယုဒသန် က ဂရိ(ဟေလသ)နှင့် ဟီးဘရူးဘာသာ(ဟေဗြဲ) တို့မှ မြန်မာဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသမ္မာကျမ်းစာသည် ယနေ့တိုင် အသုံးပြုနေသော တစ်ခုတည်းသော သမ္မာကျမ်းစာ ဖြစ်နေသည်။ သိမ်းငှက် တည်းဖြတ်မှုဟူသော ကျမ်းစာမူသစ်တစ်မျိုးကို ပြန်လည် တည်းဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ခရစ်ယာန်အများက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်းမှ ခေတ်သုံးမြန်မာစာ ဟူ၍ မူသစ်တစ်ခု ပြုစုထုတ်ဝေထားသော်လည်း အသုံးပြုမှုတွင်ကျယ်ခြင်း မရှိပါ။
၄ ခရစ်ယာန်များယနေ့တိုင်လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ဖတ်ရှုနေတဲ့သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သမိုင်း အကြောင်းအဆင့် ဆင့်
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ ရှေးကရဟူဒီများရေးသားခဲ့သည့် ကျမ်းစာများကိုတစ်စုတည်း တွဲထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယခုသုံးနေကြသောဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ အချို့သောကျမ်းများကိုပယ်၍ စုပေါင်းထားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုပယ်ထားသောကျမ်း ၁၄ တွဲကို 'အပိုကရိုင်းဖား' ဟုခေါ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာကွယ်ဝှက်ထားသော ကျမ်းများဟုဆိုလိုသည်။ ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင်များက ထိုပယ်ထားသောကျမ်းများကို သုံးမြဲသုံးသော်လည်း၊ ပရိုတက်စတန့်ဂိုဏ်းဝင်တို့ကမသုံးတော့ချေ။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အပိုကရိုင်းဖားခေါ်ကွယ်ဝှက်ထားသောကျမ်းတို့မှာ အယူဝါဒဆိုင်ရာဘက်၌ အရေးမကြီးသကဲ့သို့ ချန်ထားခဲ့သော်လည်း စာပေအဖြစ်ဖြင့်ကားတန်ဖိုးရှိပေသည်။ ထိုကျမ်းများသည်ခံ့ညားသလောက် စာပေအရေးအသားမှာရိုးသား၍ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလှ၏။ ထိုကျမ်း များသည် စာပေဂုဏ်မြောက်လောက်အောင်အရေးအသားကောင်းရုံသာမက ဗဟုသုတအဆီအနှစ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံလှသည်။
မြန်မာပြည်ရှိ ရိုမန်ကက်သလစ်အသင်းတော်သည်လည်း ၂၀၀၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့၏လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ကက်သလစ်မြန်မာကျမ်းစာတော်မြတ်ဘာသာပြန်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့မှ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်တွင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း (၂၇)စောင်၊ ဆာလံကျမ်း၊ ပညာအလိမ္မာကျမ်း(သုတ္တံကျမ်း) နှင့် ဓမ္မဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများ (Deuterocanonical Books) ပါဝင်သည့် သမ္မာကျမ်းစာ စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းသမ္မာကျမ်းစာ စာအုပ်တွင် ပါဝင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြို့များ၏ အခေါ်အဝေါ်များမှာ ဆရာယုဒသန်ထုတ်ဝေသော သမ္မာကျမ်းစာ၏ အမည်နာမများနှင့် ကွဲလွဲမှုများစွာရှိပေသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသမ္မာကျမ်းစာ စာအုပ်ကို ဟီဘရူး၊ ဂရိ၊ လက်တင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်(RSV) ဘာသာစကားတို့ကို အဓိကထား ဘာသာပြန်ဆိုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းသမ္မာကျမ်းစာစာအုပ်ကို မြန်မာပြည်ကက်သလစ်အသင်းတော်တွင် လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ခရစ်ယာန်များယနေ့တိုင်လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ဖတ်ရှုနေတဲ့သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သမိုင်း အကြောင်းအဆင့် ဆင့်
ခရစ်ယာန်များလက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ဖတ်ရှုနေတဲ့သမ္မာ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို စာသားနဲ့ရေးသားထားတဲ့ ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ နှုတ်တော်မှ ထွက် ပေါ်လာတဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဗျာဒိတ်တော် ဆိုတာဘာလဲ? ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာပထဦးဆုံးလူသား အာဒါန်မှစ၍ သခင်ယေဇူးခရစ်တော်၏ တမန်တော်ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသော တပည့်ကြီးသံဃာတော်တို့အနက် နောက်ဆုံးသောတပည့်သာဝကကြီးဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ယောဟန် ပျံလွန်တော်မူသည့်နေ့တိုင်အောင် လူသတ္တဝါခပ်သိမ်းတို့အား ထာ၀ရ အရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟ မိန့်ကြား၊ မိန့်မြွက်ထုတ်ဖော်တော်မူခဲ့သောတရားတော်ကိုခေါ်တယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဟာ လူတိုင်းဆီသို့(၂)နည်း ရောက်လာ ပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ ဘုရားသခင်၏ အလင်းကျေးဇူး တော်ညွှန်ပြခြင်းအရ ရေးသားထားသော သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ် အားဖြင့်၊ ဒုတိယနည်းကတော့ တမန်တော်အရှင်သူမြတ်များ လက် ထက်မှစ၍ အမိကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးမှ အစဉ်အဆက် သင်ကြားခဲ့သောတရားတော်အားဖြင့် လူတိုင်းဆီကို ရောက်လာပါ တယ်။
ခရစ်ယာန်များလက်ဝယ် ရောက်ရှိနေတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ အုပ်သည် အမိကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးရဲ့ အစဉ်အဆက် နှုတ်တိုက်သင်ကြားခဲ့သော တရားတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဗျာဒိတ်တော်များကိုရေးထားတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း သင်ကြားပေးခဲ့လို့ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာ အဖြစ်ခရစ်ယာန်များက ယုံ ကြည်လက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာဆိုတာဘာလဲ? သမ္မာကျမ်းစာဆိုတာ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏ အလင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ညွန်ပြ၊ နှိုးဆော်တော်မူသမျှကို ပေထက်အက္ခရာတင်၍ ရေးသားထားသော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော်ကို သမ္မာကျမ်းစာလို့ခေါ်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုပြုစုသူအဓိကပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဘုရားသခင်ပင် ဖြစ်တော်မူ တယ်။ ၎င်းကျမ်းစာတော်ကိုရေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တုံဉာဏ် ကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံများသာဖြစ်ကြတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာများ ဟာ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းရေးထားချက်များ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ သမ္မာ ကျမ်းစာစောင်များကို မြန်မာတို့ပေပုရ ပိုက်၊ ကြည်းပုရပိုက်၊ ရွှေပုရ ပိုက် စသဖြင့် ပေရွက်များ၊ ရွှေပြား၊ ငွေပြား၊ ကြေးပြားများ အပေါ် တွင် ရေးသား ပြီးလိပ်ထားတဲ့အတွက် ကျမ်းစာလိပ်များလို့ ခေါ်တွင် ခဲ့ပါတယ်။ ယခုမျက်ခေတ်စာအုပ်များကဲ့သို့မရှိခဲ့သေးပါ။ ယခု လက်ရှိ ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါရှိနေတဲ့ ပထမဦး ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံး မှာပါရှိနေတဲ့ နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတို့ဟာ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀၀) လောက်ကွာခြားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းရေးသား ခဲ့တဲ့ ကျမ်းစာလိပ်များကိုစုပေါင်းပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်စုစည်း ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် စာကြည့်တိုက်ကလေးဟုခေါ်တယ်။ Bible ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့ အနက္ကေတာ့ စာအုပ်များလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ရှေးဦးအစပိုင်းမှာ ကျမ်းမှန် များရေးသားခဲ့ကြသလို ချဲ့ထွင်၊ မြောက်ပင့်ရေးထားခြင်းများ၊ ဖတ်ကောင်းအောင် ရေးသား ချက်များ၊ ကျမ်းမျိုးစုံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဘုရားရဲ့ လမ်းညွန်လှုံ့ဆော်မှု၊ အလင်းကျေးဇူး တော်အားဖြင့် အမိအသင်းတော်ကြီးက သံဃာယနာတင်အစည်းအဝေး ပွဲများ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ကာ မိမိရဲ့ဘာသာဝင်သားသမီး ခရစ်ယာန်များ အတွက် မိမိရဲ့နှုတ်တိုက်သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် ကျမ်းတု၊ ကျမ်းမှားအများအပြားထဲမှ ကျမ်းမှန်များကိုရွေးထုတ် စုစည်းကာ ပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းကာလများမှာ ခရစ်ယာန်များဟာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊ ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းခံနေရချိန်ဖြစ်နေလို့ မူရင်းကျမ်းစာလိပ်များကို စုစည်းဖို့ အခက်အခဲနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် အေဒီ(၃၁၃) ခုနှစ်ရောက်မှ ကွန်စတန်တင်ဘုရင်လက်ထက် ရောမအင်ပါယာ တစ်ခုလုံး ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရချိန်ရောက်မှ သာသနာတောင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်ရွက် လာ နိုင်ပါတော့တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင် ခရစ်သက္ကရာဇ် အေဒီ(၃၉၃) ခုနှစ် မှာ အာဖရိတိုက် ဟစ္ပို (Hipo) မြို့မှာ ပထမဦးဆုံးသမ္မာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သံဃာယနာ တင် အစည်းအဝေးပွဲအတွင်း သန်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ အလင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ရေးသားထားတဲ့ကျမ်း စာလိပ်များကို ကျမ်းအတုများထဲမှ စိစစ်ရွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး တရားဝင်ကျမ်းများအဖြစ် ခွဲခြား သတ်မှတ်ပေးနိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အမိကက်သလစ်သာသနာ တော်ကြီးအနေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးနေတဲ့ လက်ရှိကျမ်းစာအုပ် အဖြစ်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်များရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် လူ့ဇာတိအဖြစ်ကိုမခံယူခင် ခရစ်တော်ဘုရားရှင် သည် မည်သို့မည်ပုံ ကြွလာတော်မူမည်စသည်ဖြင့် ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်အကြောင်း ကြိုတင်မြွက်ဟ ဖော်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဗျာဒိတ်တော်ကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများဟု ခေါ်ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်း (၄၆) စောင်ရှိပါတယ်။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် လူ့ဇာတိအဖြစ်ကို ခံယူတော်မူပြီးနောက် ခရစ် တော်ရဲ့ သက်တော်စဉ် လူတွေကို ကယ်တင်တဲ့ခရစ်တာ်ရဲ့ ကယ်တင် ခြင်းသမိုင်း ခရစ်တော်ရဲ့ တရားဒေသနာတော်များ တမန်တော်များရဲ့ ဆုံးမဩဝါဒတရားတော်များဟူ၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်း (၂၇)စောင်ဟူ၍ ပါရှိ နေပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (၄၆) စောင်နဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်း (၂၇) စောင် တို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကျမ်း (၇၃)ကျမ်းပေါင်းချုပ်ကို ခရစ်ယာန်များရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်နေ တဲ့ ဒီကျမ်း (၇၃) ကျမ်းဟာ၊ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀၀) အတွင်း တစ်ခေတ် ပြီးတစ်ခေတ် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဗျာဒိတ်တော်များကို ရေးမှတ်ထုတ်ထား တဲ့ကျမ်းစာအုပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းများကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ နှိုးဆော်မှု အောက်၌ ပေထက်အက္ခရာတင် ရေးသားခဲ့တဲ့ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်များ ကတော့ လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာပေးဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် အီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့ တပ်သားတစ်ဦး အီဂျစ် ဘုရင်ရဲ့ နန်းတွင်းပညာရေးကို သင်ယူတတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ကျမ်း ရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ မိုးဇယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သိုးကျောင်းသားဘဝမှ ကြီး ပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဒါဝိတ်မင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှိသုခမိန် ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ပရောဖက်ဟေရှာယပဲဖြစ် ပါတယ်။ ယုဒရဟန်းအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ပရောဖက်ယေဇကျေလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားကျောင်းသားဘဝမှ ကျမ်း ရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ပရောဖက်အာမုတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသမား တော်ဘဝမှ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ရှင်လုကာဖြစ်ပါတယ်။ အများတကာ ရွံ့မုန်းခြင်းခံရတဲ့ အနှိမ်ခံဘဝမှ တမန်တော်ဘဝအဖြစ် ရွေး ကောက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ရှင်မဿဲလို့ခေါ်တဲ့ (ရှင်မာတေဦး)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တံငါသည်ဘဝမှ တမန်တော်အကြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ တမန်တော်ရှင်ပေတရူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖာရီရှဲလည်းဖြစ်၊ ပညာကလည်းရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန်အောင် လိုက်လံသတ် ဖြတ်ခဲ့ပြီး ဘုရားတန်ခိုးတော်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကျမ်းရေး ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ တမန်တော်ရှင်ပေါလူးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျူးဘာသာဝင်များနဲ့ ရှေးဦး ခရစ်ယာန်များဟာ အယူဝါဒယုံကြည်မှုဆိုင်ရာများကို အငြင်းအခုံ ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ၊ ရှေးဦးခရစ်ယာန်များက အဓိကထား ထောက်ပြခဲ့ သောကျမ်းများကို ပြန်၍မချေပနိုင်သောကြောင့် ခရစ်သက္ကရာဇ် အေဒီ (၉၀) တွင် - ဂျဲမီးနီးယား (Jaminia) မြို့မှာ ဂျူးလူမျိုးများ စည်းဝေး၍ ဒီကျမ်းများဟာ နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါး၌ ဖြစ်ခဲ့သောကျမ်း များဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ အဓိကျမ်းကြီး (၇) ကျမ်းနဲ့ ဒါနီအဲလ် ဟောစာ တမ်းနဲ့ အက်စတာဝတ္တုကျမ်းများရဲ့ အချို့သော ကျမ်းပိုဒ်တို့ကို ဟေဗြဲကျမ်းထဲမှ တရားဝင် ပယ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ဟေဗြဲကျမ်းထဲမှ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (၃၉) ကျမ်း သာကျန်တော့တယ်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၉၀) ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး၊ ဂရိဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပေါင်း (၄၆) ကျမ်းရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဟေဗြဲဘာသာရပ်စကားနဲ့၊ တစ်နည်းပြောရရင်၊ ပါလက်စတိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဂျူးစကားပြော၊ ဂျူးဘာသာဝင်တွေအတွက်၊ ဟေဗြဲဘာသာ စကားနဲ့ရေးသားထားတဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့ (၃၉) ကျမ်းသာ လက်ခံကြတော့တဲ့အတွက် အဓိကကျမ်းကြီး (၇) ကျမ်း၊ ဒါနီအဲလ် ဟောစာတမ်းနဲ့ အက်စတာဝတ္တုကျမ်းများရဲ့ အချို့သောကျမ်းပိုဒ် တချို့ကို ရှေးဦးခရစ်ယာန်များနဲ့ ဘာသာရေးငြင်းခုံရာတွင် ရှုံးနိမ် မှုကြောင့်၊ ဟေဗြဲကျမ်းမှ ပယ်ချပစ်လိုက်ကြတော့တယ်။ ဂျူးလူမျိုး တွေဟာ နှစ်ပေါင်း (၄၀၀) မျှလောက် လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြပြီး၊ ပယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ ကျမ်းမှာ- (၁) တိုဘိဝတ္တု (The Book of Tobit or Tobias) (၂) ဂျူဒစ်ဝတ္တု (The Book of Judith) (၃) ပညာပါရမီကျမ်း (The Wisdom of Solomon) (၄) နီတိဒေသနာကျမ်း (Ecclesiasticus, or Sirach) (၅) ဘာရုဟောစာတမ်း (The Book of Baruch) (၆) မက္ခာဘေဦးသမိုင်း ပထမတြဲ (The First of Maccabees) (၇) မက္ခာဘေဦးသမိုင်း ဒုတိယတြဲ (The Second Book of Maccabees) စတဲ့ကျမ်းကြီး (၇) ကျမ်းများနဲ့ အချို့သောကျမ်းပိုဒ်များ ဖြစ်ကြတဲ့ ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်းနဲ့ ဧဿတာဝတ္တုကျမ်းပိုဒ်များပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒီချိန်ကစပြီး ခရစ်ယာန်များအတွက် မူရင်းကျမ်းစာမှာ၊ ဂရိဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားတဲ့ septuagintကျမ်းစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်း (၂၇)စောင်လုံးမှာလည်း၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်များက ဂရိဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားတော် မူခဲ့ကြပါတယ်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၃၈၂) ခုနှစ်၊ ရာ စုအားဖြင့် (၄) ရာစု တွင်၊ ရဟန္တာသူတော်မြတ် စိန်ဂျေရုမ်းအရှင်မြတ်မှ၊ ဂရိဘာသာ စကားမှ လက်တင်း ဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ ဗားလ်ဂိတ် (Vulgate) သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်တွင်၊ ဂျူးလူမျိုးများ ပယ်ခဲ့တဲ့ ကျမ်းများကို ခရစ်ယာန်တိုင်းသိဖို့အတွက်၊ အပိုင်းလိုက်သီးသန့် ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၅၂၄) ခုနှစ် နောက်ပိုင်း၊ အမိကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးမှ မာတင်လူသာရဲ့ ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန်အသင်းခွဲ ထြက္ဩားတဲ့ အခါ ကျမ်းဂရိတ်မူရင်း ဆဲပ်တွာဂျင်ကျမ်းစာအုပ်ကို ပယ်ပြီးဟေဗြဲ ကျမ်းစာအုပ်ကိုပဲအခြေပြုလိုက်တဲ့အတွက်ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်း(၃၉)စောင်သာကျန်ပါတော့ တယ်။ မာတင်လူသာဘက်လိုက်များမှာ၊ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအချို့ကို ပယ်ရုံမက ဓမ္မသစ်ကျမ်းအချို့ကိုလည်းပယ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ လူသာ ရဲ့ ပရိုတက်စတန်အသင်းကပယ်လိုက်တဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအချို့ကတော့ (၁) ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာ၊ (၂) ဟေဗြဲဩဝါဒစာ၊ (၃) ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ၊ (၄) ဗျာဒိတ်ကျမ်းများ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျမှ အခြားသော ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲများက ဓမ္မသစ်ကျမ်း (၂၇) စောင်လုံး ကိုလက်ခံခဲ့ကြလို့၊ လူသာရဲ့ ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန်အသင်းဂိုဏ်း က ၎င်းတို့ပယ်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းများကို ပြန်လည်လက်ခံလာခဲ့တော့ တယ်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုတော့ ဟေဗြဲဘာသာဂျူးကျမ်းကိုပဲ လက် ခံလိုက်တဲ့အတွက် (၃၉) စောင်သာ ယနေ့ထိတိုင်လက်ခံကြပါတော့ တယ်။ ထိုပါလက်စတိုင်းက ဂျူးများနဲ့၊ ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းကွဲများက ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှ (၇) ကျမ်းပယ်လိုက်ခြင်းကို အမိ ကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးက မိမိရဲ့ဘာသာဝင်သားသမီးများ သံသယမကင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၅၄၆)ခုနှစ်တွင် တြင်းမြို့ သံဃာယနာတင်အစည်းအဝေးပွဲကြီးကို ပြုလုပ်ပြီး ထိုကျမ်း များသည် အမိကက်သလစ်အသင်းတော်ကြီးအတွက် တရားဝင်၍ သန့်ရှင်းသော သမ္မာကျမ်းစာများဖြစ်ကြောင်း အခြားသောကျမ်းများ နှင့် တန်းတူညီတူ လက်ခံရိုသေကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေ ညာခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၄၀၀) မှ (၁၄၄၀) ခုနှစ်များ အတွင်း၌၊ သမ္မာကျမ်းစာလိပ်များကို ကက်သလစ်ရသေ့ရဟန်းများက သားရေ ချပ်များအပေါ် ကူးယူရေးသားခဲ့ကြရပြီး လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဝေခဲ့ရပါ တယ်။ ထိုမူရင်းကျမ်းစာလိပ်များကို အမိအသင်းတော်ကြီးက ထိန်း သိမ်းထားလျက် ရှိပါတယ်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၄၅၆ )ခုနှစ်မှ (၁၅၂၀)ခုနှစ်များအတွင်း သမ္မာ ကျမ်းစာကို လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့် အကြိမ်ပေါင်း (၁၀၀)၊ ဂျာမန် ဘာသာစကားဖြင့် အကြိမ်ပေါင်း (၂၇) ကြိမ်၊ အီတလီဘာသာစကား ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်း (၂၅) ကြိမ်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အခြားအခြားသော ဘာသာစကားများဖြင့် လည်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ပရိုတက်စတန်ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းဂဏ္ဍများပေါ်ပေါက်မလာမှီ၊အမိအသင်းတော်ကြီးကသမ္မာကျမ်းစာအုပ်ကို အကြိမ်ပေါင်း (၆၂၆) ကြိမ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ် သက္ကရာဇ်(၁၅၂၂)ခုနှစ် ပရိုတက်စတန်တို့ ပထမဦးဆုံးရိုက်နှိပ်ထုတ် ဝေသော သမ္မာကျမ်းစာအုပ်မှာ၊ ဂျာမာန်ဘာသာစကားဖြင့် မာတင် လူသာက ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း၌ အမိအသင်းတော်ကြီးနှင့်တကွ ပရိုတက် စတန် ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းကွဲများ၊ ကမ္ဘာ့သမ္မာကျမ်းစာအသင်းကြီးနှင့် ကျမ်းစာထုတ်ဝေရေး အသင်းအဖွဲ့များရဲ့ လက်တွဲကြိုးစား၊ ကြိုးပမ်း မှုကြောင့် အထူးသဖြင့် (၂၀) ရာစုနဲ့ (၂၁) ရာစုများမှာ သိပ္ပံပညာ တိုးတက်လာမှုကြောင့်၊ ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျှက် အထပ်ထပ်အကြိမ်ကြိမ် ရှုထောင့်သစ်၊ အမြင်သစ်၊ မျက်မှောက်ခေတ်သုံး စကားလုံးများဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး အသင်းတော်ရဲ့ သွန်သင်ချက်ကိုအတိုချုပ် ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် (၁) သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲတွင် ပါဝင်နေသော သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ကျမ်းများသည် ခရစ်တော်ဘုရားရှင်အကြောင်းကို တူညီစွာညွှန်ပြ မြွက်ဟဖော်ပြနေကြပြီး ခရစ်တော်ဘုရားရှင်၌ အဆုံးသတ်နေကြ တယ်။ (၂) သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ထဲ၌ ပါဝင်နေသောကျမ်းများဟာ ဘုရားသခင် ရဲ့ အလင်းကျေးဇူးတော် အောက်၌ ရေးသားခြင်းခံရပြီး၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားတော်၊ ဗျာဒိတ်တော်များနှင့်ပြည့်နေသော ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပါတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) သမ္မာကျမ်းစာရေးတဲ့ မူရင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီး၊ လူသား ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သခင်ဘုရားရဲ့ အလင်းကျေးဇူးတော်အောက်၌ အထူးအသုံးတော်ခံရ၍၊ လူသားအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းခံစားရဘို့ အတွက် အမှားအယွင်းကင်းစင်လျှက် သမ္မာတရားတော်ကို ရေးသား တော်မူပါတယ်။ (၄) သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကို အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြရာမှာ၊ လူသားများကို ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာ ရစေချင်လွန်းသော၊ မိမိရဲ့ အလိုတော်မြတ်ကို ဖော်ပြနေကြောင်း၊ ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော် ဆန္ဒကို အာရုံစူးစိုက်အနက်ဖွင့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ (၅) အမိအသင်းတော်ကြီးဟာ မိမိရရှိထားတဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (၄၆) ကျမ်းနဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့ကို ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပါတ်တော်အဖြစ် ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းပြုရပါတယ်။ (၆) သမ္မာကျမ်းစာများထဲမှာ၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်း၊ ဧဝံဂေလိကျမ်း လေးစောင်ကို ဗဟိုပြုထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခရစ်တော်ဘုရား ရှင်ဟာ ကျမ်းအားလုံးရဲ့ ဗဟိုအချက်အချာဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ (၇) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တစ်ခုတည်း သော အကြံအစည်တော်ဖြစ်တဲ့ ကယ်တင်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ အလို တော်၌ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်နေတဲ့ ဗျာဒိတ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။ (၈) အမိအသင်းတော်ကြီးက ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ ခန္ဓာတော်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ကြည်ညိုလေးမြတ်သလို၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုလည်း ထိုကဲ့သို့ ကြည်ညိုလေးမြတ်လျက်ရှိပါတယ်။
“ဘာရု ပရောဖက်ကျမ်း” (Baruch) သည် ပရိုတက်စတင့် ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင် မပါဝင်ဘဲ ကက်သလစ်ကျမ်းစာတော်မြတ်တွင်သာ ပါဝင်သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (၇)စောင်ထဲမှ တစ်စောင်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းများကို ကက်သလစ်တို့က “ဓမ္မဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်း”များ Deuterocanonical ဟုခေါ်ကြသည်။ ပရိုတတ်တစတင့် တို့ကမူ “အာပိုခရိပါ” Apocryphalဟုခေါ်ကြသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံတွင် “အပယ်ခံကျမ်း”ဟု အသုံးရှိခဲဖူးသည်။) ထိုဓမဟောင်းကျမ်း (၇)စောင်တွင် ပါဝင်သော ကျမ်းများမှာ တိုဘိဝတု (Tobit)၊ ဂျူဒစ်ဝတု (Judith)၊ ဘာရုပရောဖက်ကျမ်း (Baruch)၊ မကာဘေးဦးသမိုင်း (ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲ) (1 and2Maccabees) ဉာဏ်ပညာကျမ်း (Wisdom, or wisdom of Solomon)၊ နိတိဒေသနာကျမ်း (Sirach, or Ecclesiasticus) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုဓမ္မဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများသည် ဘီစီ (၃)ရာစုခန့်က ဂရိဘာသာသို့ ပြန်ဆိုထားသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း (Septuagint)တွင် ပါဝင်ကြသည်။ အဆိုပါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် တမန်တော်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ကျမ်းစာတော်မြတ်လည်းဖြစ်သည်။ ဂရိဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများထဲမှ အစောဆုံးလက်ရေးမူများဖြစ်သည့် Codex Sinaiticus (fourth century) နှင့် Codex Alexandrinus (c.450) တို့သည် အထက်ဖော်ပြပါ ဓမ္မဟောင်းများကို အခြားသော ကျမ်းများနှင့် အတူ ထည့်သွင်းထားကြသည်။
သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ့်ကြောင့် ပရိုတက်စတင့်တို့က အဆိုပါကျမ်းများကို ၎င်းတို့၏ ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှ ထုတ်ပယ်ထားသနည်း။ အမှန်တကယ်တွင် ဩဇာတိကမရှိသော ပရိုတက်စတင့်ပြုပြင်ရေးဝါဒီ မာတင်လူသာ (Martin Luther) က ၎င်းတို့ကို ပယ်ဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကျမ်းစာတော်မြတ်သည်သာ အဓိကကျသည်ဟု အပြင်းအထန် သွန်သင်ခဲ့သော်လည်း သူ၏ သွန်သင်ချက်ကို မထောက်ခံသော ကျမ်းချက်များရှိပါက ထိုကျမ်းချက်များပါဝင်သော ကျမ်းများ၏ အရေးပါမှု့ကို ငြင်းဆိုလေ့ရှိသည်။
ဓမ္မဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများတွင် ပါဝင်သော ကျမ်းများသည် အခြားသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများနှင့် ရေးသာသည့် ပုံစံဆင်တူသည်။ ဉာဏ်ပညာကျမ်းနှင့် နိတိဒေသနာကျမ်းတို့သည် ပညာအလိမာကျမ်းနှင့် အတော်ပင်တူသည်။ တိုဘိဝတုသည် ယောဘဝတုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဂျုဒစ်ဝတုသည်လည်း အက်စတာဝတုနှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူသည် (ဟေဗြေဦး အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းနှစ်ဦးသည် မိမိတို့၏ လူမျိုးကို ကယ်တင်ရာတွင် ကူညီခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်) မကာဘေးဦးသမိုင်း ပထမတွဲနှင့် ဒုတိယတွဲတို့သည် ဓမ္မရာဇဝင် ဒုတိယစောင် - တတိယစောင်၊ ရာဇဝင်ချုပ် ပထမစောင် ဒုတိယစောင်တို့ကဲသို့ သမိုင်းအဖြစ်အပျက်များကို တင်ပြထားသော ကျမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ဘာရုပရောဖက်ကျမ်းသည်လည်း ဂျေရေမိယ (Jeremiah) ပရောဖက်ကျမ်းနှင့် အလားသဏ္ဌာန်တူသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်လည်း ဓမဟောင်းတွဲဖက်ကျမ်းများမှ တွေးခေါ်ချက်များကို ကျမ်းချက်အတော်များများတွင် ထပ်တူနီးပါးပြန်ပြောင်းပြောဆိုထားသည်။ ဥပမာ- ဗျာဒိတ်တော်ကျမ်း ၁း၄ နှင့် ၈း၃-၄ တို့သည် တိုဘိဝတု ၁၂း၅၁ ကို ကိုးကားထားဟန်ရှိသည်။ ကော်ရန့်သုဩဝါဒစာ ပထမစောင် ၁၅း၂၉ သည် မကာဩဝါဒစာ ၁၁း၃၅ သည် မကာဘေးဦးသမိုင်း ဒုတိယတွဲ ရး၂၉ ကို ပြန်လည်ထင်ဟပ်ပြနေလေသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း( ၂၇ ကျမ်း)
MP3.အသံထွက်ကျမ်းစာ Archived 19 December 2014 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သမ္မာကျမ်းစာ&oldid=726006" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။